စာအုပ် စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ
LINK7 ITEM 2.1
LINK7 ITEM 2.2
LINK7 ITEM 2.3
LINK7 ITEM 2.4
LINK7 ITEM 3.1
LINK7 ITEM 3.2
LINK7 ITEM 3.3
LINK7 ITEM 4.1
LINK7 ITEM 4.2
LINK7 ITEM 4.3
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မိုဒီ မြန်မာနှင့် သြစတြေးလျသို့ နိုဝင်ဘာတွင် လာမည်
Mon, 2014-10-27 06:09
နယူးဒေလီ−အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နရန်ဒရာမိုဒီ သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ သို့ နိုဝင်ဘာ လအတွင်း လာရောက်ရန် စီစဉ် ထားပြီး ယင်းခရီးစဉ်မှာ ၎င်းဝန် ကြီးချုပ်ဖြစ် ပြီးနောက် ပိုင်း အရှည် ဆုံး နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် တစ်ခုဖြစ် သည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၁ မှ ၁၈ ရက်အ ထိ ကြာမြင့်ဖွယ်ရှိသော ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အရှေ့အာရှညီလာခံ ၌ မိုဒီသည် ဒေသတွင်း ဟန်ချက် ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု သေချာစေရေး ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်း ဆောင်များနှင့်အတူ ဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(၉) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပ မည့် ယင်းအရှေ့အာရှညီလာခံ တွင် အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင် အာရှရှိ ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားလာနိုင်ရေးတို့ အပေါ် အလေးထား ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ကြောင်း အာဏာပိုင်သတင်းရင်း မြစ်များက ပြောသည်။
ယခုခရီးစဉ်မှာ မိုဒီဝန်ကြီး ချုပ်အဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှသို့ ပထမဆုံး လာရောက်သည့် ခရီး စဉ်ဖြစ်ပေမည်။ မိုဒီသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နှစ် နိုင်ငံ ဆွေးနွေးမှုများအပြင် အိန္ဒိ ယ-အာဆီယံညီလာခံသို့ တက် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယသည် မြန်မာနိုင်ငံအ တွက် အဓိကကျသော ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖက် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းက အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြား အပြန်အလှန်သွားလာမှုများ ရှိခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆ၀ါရက်ခ်ျသည် မြန်မာ၊ စင်ကာ ပူနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွား ရောက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယသမ္မတမှာ ဗီ ယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်း လာမည့် သီတင်းပတ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
အရှေ့အာရှညီလာခံအပြင် အိန္ဒိယ-အာဆီယံညီလာခံ၌ မိုဒီ အနေဖြင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ စွာကို တွေ့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အရှေ့အာရှညီလာခံတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံများမှာ အမေရိ ကန်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ သြစ တြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့အ ပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အားလုံး ပါဝင်သည်။
Posted by Hanthawadi at 7:41 AM
ကမ္ဘာဂြိုလ်မှာ ၆ ရက်တောင် အမှောင်ကျမယ်
Tuesday, October 28, 2014 လာမယ့် ဒီဇင်လာလ ဆန်းပိုင်းမှာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဟာ ၆ ရက်လောက် အမှောင်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ နာဆာက အတည်ပြုလိုက် ပါတယ်တဲ့။ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၂ ရက်နေ့တွေမှာ ကမ္ဘာဂြိုလ်တခုလုံး အမှောင်လုံးလုံး နီးပါး ကျရောက်မှာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ နေလုံးမှာ နေမုန်းတိုင်းတခုဖြစ်ပေါ်မှာကြောင့် လို့ နာဆာက ဆိုထားတာကို bigdibi.com သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီ ဝက်ဆိုက်မှာ NASA Confirms Earth Will Experience6Days of Total Darkness in December 2014! ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါဘဲ။ နေမုန်တိုင်းကြောင့် ဖုန်တွေ၊ အပျက် အစီးအပိုင်းအစတွေ လွှင့်ဆင်လာပြီး အဲဒါတွေက နေရောင်ခြည်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ လောက် ကို တားဆီးပိတ်ကွယ်ထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နာဆာရဲ့ အကြီးအကဲကတော့ ဒီကိစ္စကို ကြေညာချက်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် စိတ်မပူကြဖို့ အေးအေး ချမ်းချမ်းပဲ ဖြစ်မှာ ပါလို့လည်း ပြောပါတယ်။ အခုဖြစ်ပေါ်မယ် နေမုန်တိုင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ဝ လောက်အတွင်းမှာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း နာရီပေါင်း ၂၁၆ နာရီကြာမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာကြီးမှာ ၆ ရက်လောက် အမှောင်ဖြစ်သွားဖို့ ရှိပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ မရှိဘူးလို့လည်း နာဆာ အရာရှိ တဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကြောင့် တချို့ကလည်း ဖယောင်းတိုင်နဲ့ မီးစက်တွေ အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့ ဟာသနှောပြီး ကွန်မန့်တခု ရေးထား ပါသေးတယ်။ မြန်မာပရိသတ်တချို့တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီး ခဏခဏ ပျက်တာကြုံနေရဖန်များတော့ အမှောင် မှာနေတာ ကျင့် သား ရနေတဲ့ မြန်မာအတွက်ကတော့ ၆ ရက်လောက် အမှောင်ဖုံးတာ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး လို့ လည်း မှတ်ချက် ရေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by Hanthawadi at 7:27 AM
အင်ဒိုနီးရှားကို အတုယူဖို့ ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေပြောဆို
မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ အတူယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ပြောင်းလဲပုံကို မြန်မာအနေနဲ့ အတုယူသင့်တယ်လို့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အတွင်းရေးမှူး ပဒို ကွယ်ထူးဝင်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အင်္ဂါနေ့က ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်း ၁၉ ရက် မနေ့ကထုတ်တဲ့ ဂျကာတာပို့စ် သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဂျကာတာမြို့က THC ခေါ် The Habibie Center မှာ ၂ ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား-မြန်မာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ပြောလိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် သူက ယဉ်ကျေးမှုများစွာ တည်ရှိနေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အောင်မြင်အောင် ထိမ်းသိမ်းထားနိုင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားတောင် အဲဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘာကြောင့် မဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာလဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ အစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်လို့KNU အတွင်းရေးမှူး ပဒို ကွယ်ထူးဝင်းက ပြောပါတယ်။
THC ဥက္ကဌ မစ္စ ဒေဝီအဏ္ဏဝါက အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မြန်မာကို နှိုင်းယဉ်ကြည့်ရင် တိုင်းတပါး ကိုလိုနီလက်အောက်မှာ နှစ်ကာလအတော်ကြာနေခဲ့ရတာမျိုး၊ ပုံသဏ္ဍန်တူတာတွေ တော်တော်များ များ တွေ့ရတဲ့အကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်တဲ့အခါ အပြန်အလှန် လေ့လာစရာတွေ ရှိတဲ့အကြောင်း၊ အခုလိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးကနေ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ဖို့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင် တဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted by Hanthawadi at 8:18 AM
Iranian President Hassan Rouhani (R) meets Organization of Islamic Cooperation Secretary General Iyad Ameen Madani in Tehran on February 5, 2014.
Wed Feb 5, 2014 11:16AM
Iranian President Hassan Rouhani says the prevention of atrocities and massacre of Muslims worldwide is the main duty of the Organization of Islamic Cooperation.
Posted by Hanthawadi at 7:51 AM
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးရွှေမောင်ကို မိခင်ပါတီနှင့် လွှတ်တော်တို့က စစ်ဆေးအရေးယူရန် အစီအစဉ်မရှိဟုဆို
စိုးသန်းလင်း|ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
နိုင်ငံတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေသည် ဟူသည့် သမ္မတသ၀ဏ်လွှာ အရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးရွှေမောင်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဌာနချုပ်၌ စစ်ဆေးခဲ့သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၄င်းအား မိခင်ပါတီနှင့် လွှတ်တော်တို့ က စစ်ဆေးအရေးယူ ရန် အစီအစဉ် ရှိနိုင်ပါသလား ဟူသော မဇိ်္ဈမ၏အမေးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တရားစီ ရင်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ သူရဦးအောင်ကိုက အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
“အခုအထိတော့ အစီအစဉ် မရှိသေးပါဘူး။ ရှိရင် ပြောပါ့မယ်” ဟု ၎င်းက ယနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော် ခေတ္တ နားချိန်တွင် ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် သည် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင်
ဖြစ်သော ကြောင့် မိခင်ပါတီအနေဖြင့် ၎င်းအားစစ်ဆေး အရေးယူသွားဖို့ ရှိပါသလားဟု မေးခဲ့ရာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဌ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဌေးဦးက “ဒီကိစ္စကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။ ရုံးမှာ တစ်နေ့လုံး ပြည်ထဲရေးက လာမေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီနေ့က ရုံးမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မသိ ဘူး။ မတွေ့ဘူး။ ပါတီအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘာမှကို မသိသေးဘူး။ တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ကာယကံရှင် ကလည်း သတင်းပို့လို့ရတာပဲ။ ဌာနဆိုင်ရာကလည်း သတင်းပို့မှာပဲ။ အခုတော့ လောလောဆယ် ဘာမှ သတင်းပို့တာ မရှိသေးပါဘူး။ လွှတ်တော်ကိုလည်း သတင်းပို့ ရမှာပဲ။ အခုလွှတ်တော် ဘက်ကလည်း ဘာမှ သတင်းမကြားပါဘူး။ သိလာရင်တော့ သိတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားမှာပေါ့” ဟု ပြန်လည်ဖြေ ကြားသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် အာဏာရပါတီလည်းဖြစ်ပေရာ ၎င်းပါတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပါတီဥက္ကဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ၍ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကလည်းဖြစ် သည့် သူရဦးရွှေမန်းထံသို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးရွှေမောင်အား စစ်ဆေးခွင့်တောင်းသည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပို့ပြီးမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့က စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒု-ဥက္ကဌတစ်ဦးဖြစ်သော ဦးဌေးဦးက လုံးဝမသိကြောင်း ငြင်းဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထဲရေးက ၎င်းအား စုံစမ်းမေးမြန်းစဉ် အဆင်ပြေမှု ရှိ၊မရှိ မဇ္ဈိမက မေးသည်ကို ဦးရွှေမောင်က “အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ သိချင်တာတွေကို မေးတာပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်ရှင်းပြတယ်။ အဓိက ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကတော့ ဒီလိုစွပ်စွဲတာသည် ဒီဗွီဘီရဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ရတာပါ။ စာသားထဲမှာလည်း မပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ဖြေတာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ ကျွန်တော်က ပြည် သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်လို့ ရွာသားတွေက တင်ပြလာတာကို ပြန်ပြော ရတဲ့ သဘောဖြစ်တယ် ဆို တာ ရှင်းပြပါတယ်။ သတင်းဌာနကလွှင့်တဲ့ Edited Version ကို မကြည့်ဘဲ Full Version ကို ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ဖြေခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထဲရေးက ၎င်းနှင့် နောက်ထပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက်ပြော ကြားခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုစေ လောလောဆယ်၌ လွှတ်တော်ကရော၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကပါ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ် ဦးရွှေမောင်အပေါ် စစ်ဆေးအရေးယူမှု မရှိသေးပေ။
Posted by Hanthawadi at 1:36 PM
မောင်တောမှ ရိုဟင်ဂျာများအား သတ်ဖြတ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ မြန်မာ အစိုးရကို ကမ္ဘာဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ တောင်းဆို
ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၄
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ဒုချီးရားတန်း ကျေးရွာက သတ်ဖြတ်ခံ ရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေး သင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလအတွင်းမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် အနည်းဆုံး (၄၀) လောက် သတ်ဖြတ် ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ Jim Yong Kim က တနင်္လာနေ့မှာ တောင်းဆိုပါတယ်။ "အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ လျစ်လျှူရှုထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက် အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းပေါင်းစုံ အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပြီး သင့်လျော်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း" - ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ Jim Yong Kim က ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလ အစောပိုင်းတုန်းကပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာက ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်အနည်းဆုံး (၄၀) လောက် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဂျင်ယုံကမ်ဟာ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်သွားတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖော်ရမ်မှာလည်း မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပြီး မနေ့က ညနေပိုင်းမှာတော့ နေပြည်တော် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်က တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဂျင်ယုံကမ်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းတုိ့အပြင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ပြည်သူအားလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရေးဆိုတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ရည်မှန်းချက်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂,၀၀၀) ပမာဏရှိတဲ့ နှစ်ရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်သွား တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကမ္ဘာဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားခဲ့ကြောင်းကို ဗီအိုအေရဲ့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့် သတင်းမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Link => http://burmese.voanews.com/content/world-bank-will-support-2-millions-dollars-for-myanmar-health-and-electrics-/1838313.html
Posted by Hanthawadi at 12:31 PM
ဘူးသီးတောင်မြို့ နှင့် မောင်တောမြို့ သွားရာလမ်းတွင် ပုပ်ပွနေသော ရုပ်အလောင်းများတွေ့ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် / ဘူးသီးတောင်မြို့ မှ မောင်တောမြို့သို့ သွားရာလမ်းဘေးရှိ တပ်မင်းချောင်းကျေးရွာအနီး ခလရ ၂၃၄ တပ်ပိုင်တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ၂၆ / ၀၁ / ၂၀၁၄ နေ့ ညနေပိုင်းအချိန် ပုပ်ပွနေသော ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရုပ်အလောင်းများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တွေ့ရှိပုံမှာ တပ်မင်းချောင်းရွာမှ နွားကျောင်းသားများ နွားကျောင်းရင်း အပုပ်နံ့ထွက်နေ၍ ယင်းနေရာအား တူးဆွကြည့်ကြရာ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် အသတ်ခံထားရသော ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရုပ်အလောင်းများ တွေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။
အနီးအနားရှိရွာသားများ ၂၇ / ၀၁ / ၂၀၁၄ နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု့ကြရာ ခလရ ၂၃၄ မှ ကြည့်ရှု့ခွင့် မပေးပဲ တားဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၎င်း ပုပ်ပွနေသော ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရုပ်အလောင်းများ တွေ့ရှိရာနေရာသည် တပ်မင်းချောင်းရွာ အနီးတွင်ရှိသော ခလရ ၂၃၄ တပ်ပိုင်တောင်ကုန်း မြေနေရာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၇ / ၀၁ / ၂၀၁၄ နေ့ မနက်ပိုင်း တွင် စောလျင်စွာကြည့်ရှု့ခွင့်ရသော ရွာသားများမှာ ၎င်း ခလရ ၂၃၄ တပ်ပိုင်တောင်ကုန်းပေါ်တွင် မြှုပ်နှံထားသော ပုပ်ပွ ရိုဟင်ဂျာ ရုပ်အလောင်း များစွာ တွေ့ခဲ့ကြကြောင်း ၎င်း ဒေသခံရွာသားများမှ ပြောပြသည်။
မကြာသေးမီ လများအတွင်းက နည်းမျိုးစုံဖြင့် အသတ်ခံထား ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ၏ ရုပ်အလောင်းများမှာ ပုပ်ပွနေ၍ စိတ်မချမ်းမြေ့ ဖြစ်ရပါကြောင်း ၎င်း ဒေသခံရွာသားများမှ ပြောပြသည်။
သတင်း - အပုချေ ( မာန်အောင်ကျွန်း )
Posted by Hanthawadi at 8:36 AM
The United Nations has urged Myanmar to investigate recent killings of Rohingya Muslims in Rakhine state
Posted by Hanthawadi at 8:26 AM
Labels: မှုခင်းသတင်း, ရိုဟင်ဂျာသတင်း
မောင်တောမြို့၌ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း အကြောင်း ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပ
မောင်တော ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လတွင် လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည့် အတွက် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များသည် ရခိုင် ပြည် နယ်၊ မောင်တော မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု အလိုက် ကွင်းဆင်း၍ လူဦးရေ စာရင်း ကောက် ခံခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍ ရှင်းလင်း ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဟောပြောပွဲ များကို မောင်တော မြို့ နယ်၊ မြောက်ပိုင်း မြောတောင် ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ယနေ့ နံနက် (၈း၃၀) နာရီမှ (၁၀) နာရီထိ လည်းကောင်း၊ ဓားကြီးစား ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် (၁၁) နာရီမှ (၁၂) နာရီထိ လည်းကောင်း၊ သူဦးလာ ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် နေ့လည် (၁) နာရီမှ (၂း၃၀) နာရီထိ လည်းကောင်း ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း ဒေ သခံ တစ်ဦးက RB News သို့ ပြောပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲ များကို မောင်တော မြို့နယ် ကျီးကန်းပြင် ကျေးရွာ အခြေစိုက် မကဖ အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ခွဲမှူး လ၀က ဦးစီး အရာရှိ ဦးမောင်မောင်အေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့က ရှင်းလင်း ဟောပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
မြောတောင် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သော သန်းခေါင် စာရင်း အကြောင်း ရှင်း လင်းဟောပြောပွဲသို့ဒေသခံရိုဟင်ဂျာ၅၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊တက်ရောက်ခဲ့သူများကိုယ် စား မော်လ၀ီ ဦးအာဇီဇူ ရာမန်က "ကျွန်တော်တို့သည်မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များ ဖြစ် ပါ သော်လည်း၊ အစိုးရ ဘင်္ဂလီလို့ရေးသွင်းဖြည့်စွက်လျက်ရှိပါသဖြင့်၊ ကျွန်တော် တို့က ၂၀၁၄ သန်းခေါင် စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လို့ ရေးသွင်း ဖြည့်စွက် ပါက နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ကျွန်တော် တို့ကို အရေးယူ ပါမည်လား" ဟု လ၀က ဦးစီး အရာရှိ ဦးမောင်မောင်အေး ကိုမေးမြန်းရာ - "ရိုဟင်ဂျာတော့ နည်းနည်း ဘဲ တွေ့ရ ပါတယ်။ အစိုးရ ကတော့ ဘင်္ဂလီလို့ အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင် စာရင်းမှာ အားလုံးက တညီတညွတ် တည်း ရိုဟင်ဂျာလို့ရေးသွင်းဖြည့်စွက်ပါကဘင်္ဂလီပျောက်ဆုံးမှာ ဖြစ် ပါတယ်" ဟု ဦးမောင်မောင်အေး က ဖြေကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
Posted by Hanthawadi at 9:07 AM
၀န်ထမ်းများ လစာတိုးမည်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မည်မဟုတ်
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများအားလုံးအား သတ်မှတ်လစာထက် ကျပ်နှစ်သောင်းကို ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းအတွင်း၌ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက်နေ့ ကျင်းပသည့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးမှ သိရှိရသည်။
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက် သမ္မတမှ မိန့်ခွန်းအတွင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးရန် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးချက် များပြီးမှသာ တိုးမြှင့်နိုင်ရေးမှာ သေချာမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“အချက်နှစ်ချက်နဲ့ တိုးမြှင့်ပေးတာပါ၊ ကျပ်နှစ်သောင်းအပြင် ပင်စင်လစာနဲ့ ဆုကြေးငွေတွေ တိုးမြှင့်ပေးဖို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ပြောဆိုသည်။
လစာတိုးမြှင့်ပေးရသည့် အချက်နှစ်ချက်မှာ ရသုံးခန့်မှန်းငွေများအား စာရင်းချုပ်ရာ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ များပြားလာခြင်း၊ အခွန်ရရှိမှုများလာခြင်းနှင့် လူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်လာခြင်းတို့အား ကာမိစေရန်အတွက် တိုးမြှင့်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
“လစာတိုးတယ်ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ပါဘူး၊ ရာထူးကြီးတွေထက် အောက်ခြေက ရာထူးငယ်တွေက ပိုပြီး တိုးသင့်ပါတယ်၊ သူတို့တွေ ရတဲ့လစာနဲ့ အတော်ကို ခက်ခဲနေတာ တကယ်ပါပဲ” ဟု တပ်မတော်မှအရာရှိတစ်ဦးက လစာတိုးမြှင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၀န်ထမ်းလစာတိုးမြှင့်ပါက ကုန်ဈေးနှုန်းများ တိုးမြင့်လာနိုင်သော်လည်း အသေးစိတ် (မိုင်ခရို) အချက်အလက်များမှ စတင် တွက်ချက်ပြီး လုပ်ဆောင်ထားသည့်အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်လာဖွယ် မရှိကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောဆိုထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ လစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးစိန်းတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်း တတိယ အကြိမ်မြောက် လစာတိုးမြင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပါက လာမည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ၀န်ထမ်းများအားလုံး ကျပ်နှစ်သောင်းထက်မံတိုးမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Hanthawadi at 10:09 PM
IT Mutual Friend(ပြည်)
MIT Online အင်ဂျင်နီယာ ပညာလေ့လာရန်
Online Dip: in Law
သတင်းစာ နှင့် ဂျာနယ်မျိုးစုံ
အမျိုးကောင်းသား IT ဆိုဒ်
ကျော်ခွဖို့ proxy server များ
မြန်မာ IT လူငယ်
ဖုန်းအချင်း ဖိုင်ပို့သူတွေအတွက် bluetooth ထက် ၁၀-ဆလောက်မြန်တဲ့ zapya(Update)
ဒီကောင်လေးက bluetooth ထက် တစ်ကယ်ကို ၁၀-လောက်မြန်တယ်ဗျာ… သူက wifi connection ကိုသုံးထားတာပါ… zapya ကိုသုံးဖို့အတွက် သုံးမဲ့စက်အားလံ...
ဘီလူး ရခိုင် နှင့် ဓမ္မ အန္ဒရာယ် (CANNIBAL AND THE RELIGIOUS DANGER)
လူမျီုးပေါင်းစုံနေထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထူးဆန်းသောရခိုင်လူမျီုးတစ်မျီုးကိုတွေ့ရသည်။ထိုလူ မျီုး၏ အမည် နာမနှင့်အကျင့်စာရိတ္တလည်းအလွန်ထူ...
Tuesday, March 26, 2013 မိတ္ထီလာခရိုင်တွင်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်း တွေကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ရသူ၁ သောင်း ၂ ထော...
23.1.2014 On Thursday, the United Nations expressed concern over the growing levels of violence in Myanmar, saying at least 48 Muslims...
RB News 8.1.2014 မောင်တော ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လတွင် လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည့် အတွက် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပု...
"သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ဝါဒဖြန့်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ခွင့်ပြုခြင်း "
မိတ္ထီလာ အရေးမှာ အစိုးရကို လက်ညှိုးထိုးတာ ဒါလောက်ကြောင့်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါက ဖြစ်လာပြီးမှ ပွားအောင် ကြီးအောင်လုပ်ယူတဲ့အပိုင်း။ မ...
Thursday, August 29, 2013 မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရက နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်လာ ကတည်းကစပြီး ရန်ကုန်...
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Feb 4, 2013 12:50:10 PM လတ်ေတလာတွင် သန်းခေါစင်ာရင်း ကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ပြဆင်မင်ှုများ ဆောရင်ွက်နေဆဲ ကာလဖြစ်သည့်အတွက်၂၀၁၄ ခု...
Thursday, November 08, 2012 ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း No comments လူမှုကွန်ယက်တွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ လူထု ဘယ်လောက် ချိတ်ဆက်မိ...
ပခုက္ကူ အခြေစိုက် အစိုးရတပ် အမှတ် (၁ဝ၁) တပ်မဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်သွား
ဇန္နာဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ ယနေ့မနက် (၄) နာရီမှ စတင်ပြီး လဂျားယန်စစ်မျက်နှာမှ ခါယာတောင်ကျောကို စစ်ဆင်ခဲ့သော ပခုက္ကူအခြေစိုက် အ မှတ် (၁...
Blog Archive 10/26 - 11/02 (2) 02/16 - 02/23 (1) 02/02 - 02/09 (2) 01/26 - 02/02 (2) 01/19 - 01/26 (1) 01/05 - 01/12 (7) 12/29 - 01/05 (4) 12/22 - 12/29 (6) 12/15 - 12/22 (5) 12/08 - 12/15 (4) 11/24 - 12/01 (8) 11/17 - 11/24 (5) 11/10 - 11/17 (1) 11/03 - 11/10 (3) 10/27 - 11/03 (7) 10/20 - 10/27 (17) 10/13 - 10/20 (3) 10/06 - 10/13 (11) 09/29 - 10/06 (3) 09/22 - 09/29 (7) 09/15 - 09/22 (18) 09/08 - 09/15 (12) 09/01 - 09/08 (31) 08/25 - 09/01 (24) 08/18 - 08/25 (3) 08/11 - 08/18 (25) 08/04 - 08/11 (3) 07/28 - 08/04 (12) 07/21 - 07/28 (1) 07/14 - 07/21 (32) 07/07 - 07/14 (35) 06/30 - 07/07 (15) 06/23 - 06/30 (23) 06/16 - 06/23 (34) 06/09 - 06/16 (46) 06/02 - 06/09 (16) 05/26 - 06/02 (38) 05/19 - 05/26 (49) 05/12 - 05/19 (89) 05/05 - 05/12 (77) 04/28 - 05/05 (86) 04/21 - 04/28 (123) 04/14 - 04/21 (82) 04/07 - 04/14 (93) 03/31 - 04/07 (84) 03/24 - 03/31 (78) 03/17 - 03/24 (59) 03/10 - 03/17 (54) 03/03 - 03/10 (51) 02/24 - 03/03 (82) 02/17 - 02/24 (55) 02/10 - 02/17 (62) 02/03 - 02/10 (108) 01/27 - 02/03 (130) 01/20 - 01/27 (100) 01/13 - 01/20 (36) 01/06 - 01/13 (25) 12/30 - 01/06 (17) 12/23 - 12/30 (18) 12/16 - 12/23 (64) 12/09 - 12/16 (64) 12/02 - 12/09 (80) 11/25 - 12/02 (58) 11/18 - 11/25 (21) 11/11 - 11/18 (14) 11/04 - 11/11 (40) 10/14 - 10/21 (26) 10/07 - 10/14 (2)
Arakan Press. Picture Window theme. Powered by Blogger.